Qormada Aqoonta ee Soomaaliya
Qoraa curis ah
Qormada tacliintaIibso qormadaQormada kulleejadaQoraal gaar ahQormada iibka ahCaawinta QormadaLacagta qormadaQor qormadaydaQor qormadayda
Qoraalkaaga shaqsiga ah iyada oo aan lacag qarsoon la bixin. Ka dalbo Soomaaliya qoraalladeeda caadada ah ee ka soo baxda Ingiriiska iyo Mareykanka. 24/7 Taageero, Dib u eegisyo Bilaash ah iyo shaqooyin tayo sare leh waqti gaaban
Dalbo hadda Qiimaheena
Qorayaal aqoon u leh
Macaamiil ku qanacsan
Tusmada asalka ah
Faa’iidooyinka Cajiibka Ah Ee Ku Raaxeysta
24/7 Adeegga Taageerada Macaamiisha
Dib u eegis bilaash ah codsi kasta
Kudarro yaab leh
Bogag bilaash ah
Qaabaynta bilaashka ah
Caawinaad deg deg ah
Khubaro sare oo kiro ah
Bilaw Barashada Cilmiga Maanta
Keydso Lacag Iyo Waqtiga Adeegyada Qorista Qormada
Ma sahlana inaad noqoto arday u baahan inuu qoro curis tacliimeed. Waxaa jira shuruudo fara badan oo xeerarku wareeri karaan. Ma jiraan tilmaamo la dejiyay oo waxba dhagax kuma qorna. Si aad ugu fududaato meelayntaada qorista tacliimeed waa inaad iibsataa adeegyada maqaalka.
Adeegyada qorista tacliinta waxay la mid yihiin adeeg kasta oo kale oo aad u adeegsan lahayd ganacsiga. Waxaad bixinaysaa waxaad ubaahantahay waadnaheleysaa waxaad ubaahantahay. Tani waa run gaar ahaan markay tahay qormooyinka tacliinta. Ku dhaji awooda kumanaan kun oo qorayaal curis tacliimeed ugu yar shan doolar bishiiba.
Dalbo qorista qoraalka curyaaminta ee kuleejka loo adeegsado oo waraaqahaaga u tifaftiraan naxwaha, qaabka, xarakaynta, iyo caddaynta. Ka mid noqo adeeg ku siinaya tijaabo bilaash ah oo kuu oggolaanaysa inaad qorto oo aad dib u qorto waraaqahaaga wakhti kasta oo aad rabto. Qoritaanka waraaqaha tacliinta waa waqti iyo daal. Culeyska walwalka ee dhammaystirka mashruuca iyo ka gudubka imtixaanka u qalmidda ayaa intabadan badiyaa waxyeelo u gaystaa isku kalsoonaanta ardayga iyo ladnaanta maskaxdiisa. Ardayda waa in loo oggolaadaa inay ku nastaan ​​oo ku raaxaystaan ​​shaqadooda halkii aan naftayda ka shaqeyn lahaa ilaa aan dhinto. Qorayaasha tacliinta, waxaad lahaan doontaa tifaftirayaal xirfadlayaal ah oo dib ufiirinaya shaqadaada oo kaa caawinaya inaad abuurto shaqo heer sare ah.
Badbaadso waqti iyo lacag adoo iibsanaya adeegyada maqaalka. Waxaad iibsan kartaa hal ama dhowr adeeg oo waxaad u isticmaali kartaa hadba sida loogu baahdo. Haddii aad qorto hal curis simistar, waad iibsan kartaa wax kabadan hal adeeg si had iyo jeer aad uhesho waxyaabo cusub oo la heli karo. Uma baahnid inaad ka walwasho xusuusta inaad iibsato adeeg ama inta aad iibsanayso. Markaad iibsatid adeeg, waxaad u iibsanaysaa adeegga intaad ku jirto heshiiskaaga.
Ardayda badankood waxay ogaadaan inay hayaan waraaqo badan oo ay ku dhammaystiraan simistar kasta. Xaaladdan oo kale, macno ayey leedahay in la iibsado adeeg ku siinaya adiga shaqada ugu sareysa ee la heli karo. Uma baahnid inaad waqti siisid si aad uqorto waraaqahaaga. Taabadalkeed, waxaad heli kartaa qorayaasha akadeemiyadeed ee ugufiican ee kaaga shaqeeya adoo hubinaya in shaqooyinka lagaalay ay si sax ah udhamaadeen iyo waqtiga loogu talagalay.
Adiga ayaa mas'uul ka ah maaraynta miisaaniyadda iskuulkaaga? Miyaad la socotaa inta lacag ah ee socota xilli kasta oo warqad ah iyo inta soo socota bil kasta? Macallimiintu badanaa waxay ku mashquulsan yihiin mashaariic kale waxayna u xilsaaraan waraaqaha ardayda iyo qormooyinkoodu waxay noqon karaan hawl adag. Macallimiinta qaar waxay u qoondeeyaan waraaqo isku mid ah ardayda kala duwan, qaarna waxay u oggolaadaan inay qoraan qorayaal madax bannaan.
Maadaama aadan u baahnayn inaad wax ka qabato baahiyaha adag ee aqoonyahannada, maxaad isku dayi weyday inaad xoogaa lacag dhigato adoo iibsanaya adeegyada qorista tacliinta laga bilaabo bilowga simistarkaaga. Waxaad heli kartaa qorayaal aqoonyahano tayo leh oo kuu shaqeeya sanadka oo dhan si ay kuugu qoraan waraaqahaaga isla markaana kuugu soo celiyaan waqtiga. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad ku raaxeysato khibrada barashada adigoo dhowr doolar jeebka ku helaya toddobaad kasta. Tani waa xaalad guul-guul dhammaan hareeraha!
Sidaan horay u soo sheegnay, adeegyada qaar waxay bixiyaan kaalmo sanad dugsiyeedka oo dhan, oo ay ku jiraan tafatirka iyo dib u akhrinta. Haddii aad shaqaaleeysid qoraa curis ah oo la heli karo oo keliya inta lagu jiro bilaha qaarkood ee sanad-dugsiyeedka, waxaa laga yaabaa inaad seegto fursado aad ku qorto qoraalkaaga muddo cayiman. Markaad shaqaaleyneyso adeegga qormada, hubi inaad hesho shirkad bixisa adeegyo dhowr ah oo kala duwan oo si wadajir ah adiga kuugu shaqeynaya sannadka oo dhan. Qoraa aqoonyahan ah ayaa kaa caawin doona inaad soo uruuriso oo aad dib u eegto waraaqahaaga iyo sidoo kale inuu kaa caawin karo wixii dhibaato ama walaac ah ee aad ka qabi karto warqadda. Adeegyada qorista qormooyinka xirfadeed waa hab fiican oo lagu bixiyo waxyar oo waxbadan loo keydsado adoo hela qorayaal aqoon leh si ay kuugu soo gudbiyaan qormooyin tacliineed oo tayo leh.
Adeegga Qoraalka Sare ee Caawinta Khadka Tooska ah
Dhig amarkaaga oo ka hel kaalmo xirfadeed qorayaasha tacliinta. Had iyo jeer jawaab degdeg ah oo tayo sare leh
Adeegga qorista Qormada
Qormada iibka ah
Qoraal gaar ah
Adeegga Qorista Qormada ee Dalkaaga